Somaliland: “Gardarrada Xuduudka ee Soomaaliya Waa Nin Beer ninkale Doonaya, Suurtagalna Maaha’e Madaxweynaha waxaan leeyahay…” - Wargane News
Home Somali News Somaliland: “Gardarrada Xuduudka ee Soomaaliya Waa Nin Beer ninkale Doonaya, Suurtagalna Maaha’e...
Suldaan Saleebaan Cali Ismaaciil ayaa shaaca ka qaaday in isbedel lagu sameeyo xuduudaha qaarada Afrika aanay suurtagal ahayn, xuduudka u dhexeeya Somaliland iyo Soomaaliya-na la mid yahay, markaa ninkii beer ninkale doonayaa, hayska soo baxxo.
“Waxaan salaamayaa Madaxweynaha JSL Md. Muuse Biixi Cabdi, waxaan leeyahay Hambalyo, Ilaahay xilka ka kuu fududeeyo. Madaxweynaha waxaan leeyahay xuduudaha difaacoodu waa waajib muqadas aah, dulqaadna ha lagu daro.
“Qolyaha soo duulaya waxaan leeyahay gardarooyinka joojiya,gardarooyin badan ayaad wadaane joojiya.
“Xuduudaha dhamaantood bad, hawo iyo berriga waxa dhigay ummadihii haysan jiray dhulka Soomaalidu degto. Sanandkii 1960, dawladii Soomaaliya wasiir la odhan jiray Axmed Yuusuf Ducaale ayey Masar u dirtay, wuu isku raray dadkii aynu xuduudahaa la lahayn, haddaydaan haayn jawaabtii la soo siiyey, xog-ogaalka wax weydiiya?.
“Xuduudaahu dhamaan Afrika iyo Ajanabi kale ayey khuseeyaan ayaaa lagu yidhi, xuduud halkeeda laga dhaqaajin karo immika ma jirto ayaa lagu yidhi, malaa raggii arrimahaa ogaa way idinka dhamaadeene, dadka toyda. Xuduudkaa gudban eed yaraysanaysaan, xuduudaha ayey la mid tahee Bismilaysta, qirrid la’aantiinu waa gardarro.
“ Qoskayaga badhna jabuuti ayuu degan yahay, badhna Somaliland, Itoobiya, halka Jifi-micidheer marka laga bilaabo Beertayada xuduudka ayaa kala dhexmara, walaaladay badhna Itoobiya ayey degan yihiin, badhna halkan, kuwa halkaa jooga, annaga na soo damci mayaan oo Itoobiya & Jabuuti ayaan ku daraynaa odhan maayaan, annaguna damci kari mayno oo dad isir ah ayaa Itoobiya naga joogo, waan ku duulaynaa odhan mayno, taasina waa garrdaro labaad ood samaysaane joojiya. “Puntland lama aqoon iyo xarfaha haatan soo baxay’e, boonderiga gaaladu dhigeen, waa halkii hore’e, ninkii beer nin kale doonayaa, hayska soo baxxo.